ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္ Mohib Ullah ကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈနဲ႔ မသကၤာသူ ၃ ေယာက္ကို ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႔က ေျပာပါတယ္။ မသကၤာသူေတြကို ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း Cox’s Bazar ေဒသ ရဲအရာရွိ Naimul Huq က AFP သတင္းဌာနကို ေျပာေပမယ့္ အေသးစိတ္ေတာ့ မေျပာပါဘူး။
ARSPH ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Mohib Ullah ဟာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး အပါအဝင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ အခြင့္အေရးအတြက္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔လုပ္ရပ္ေတြအေပၚ မႏွစ္သက္တဲ့ သေဘာထားတင္းမာသူေတြရဲ႕ အသက္အႏၲရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ အရင္ကတည္းက ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သတင္းေတြက ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ သူပစ္ခတ္ခံရတာကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ Habib Ullah ကေတာ့ ARSA ႐ိုဟင္ဂ်ာ အစြန္းေရာက္အဖဲြ႔ရဲ႕ လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။
ARSA အဖြဲ႔ကေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္ အသတ္ခံရတဲ့အေပၚ တုန္လႈပ္ဝမ္းနည္းေၾကာင္းနဲ႔ သူတို႔အဖဲြ႔အေပၚ စြပ္စဲြခ်က္ဟာ အေျခအျမစ္ မရွိဘူးလို႔လည္း တုံ႔ျပန္ထားတာပါ။
သူေသဆုံးမႈေၾကာင့္ ကုလသမဂၢနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ အဖဲြ႔ေတြက ဝမ္းနည္းေၾကာင္းနဲ႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ အကာအကြယ္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းမႈေတြလည္း ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး A.K. Abdul Momen ကေတာ့ တာဝန္ရွိသူေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္ ကင္းစခန္းတခ်ဳိ႕ကို ARSA ႐ိုဟင္ဂ်ာ အစြန္းေရာက္ေတြက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တုန္းက တိုက္ခိုက္ခဲ့တာကို တုံ႔ျပန္တဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးေတြေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ၾကတာပါ။
ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မခံေပမယ့္ ရခိုင္ျပည္နယ္က ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို စိစစ္လက္ခံမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံနဲ႔ေရာ ကုလသမဂၢနဲ႔ပါ သီးျခားစီ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေတြ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။
ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင် အသတ်ခံရမှုအတွက် မသင်္ကာသူ ၃ ဦးကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဖမ်းဆီး
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံက ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင် Mohib Ullah ကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့ မသင်္ကာသူ ၃ ယောက်ကို ဖမ်းဆီးထားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ မသင်္ကာသူတွေကို ဖမ်းဆီးထားကြောင်း Cox’s Bazar ဒေသ ရဲအရာရှိ Naimul Huq က AFP သတင်းဌာနကို ပြောပေမယ့် အသေးစိတ်တော့ မပြောပါဘူး။
ARSPH ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ရခိုင်ပြည်နယ် ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Mohib Ullah ဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေး အပါအဝင် ရိုဟင်ဂျာတွေ အခွင့်အရေးအတွက် ဦးဆောင်လှုပ်ရှားနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့လုပ်ရပ်တွေအပေါ် မနှစ်သက်တဲ့ သဘောထားတင်းမာသူတွေရဲ့ အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ အရင်ကတည်းက ရှိခဲ့ကြောင်းလည်း သတင်းတွေက ဖော်ပြကြပါတယ်။ သူပစ်ခတ်ခံရတာကို ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ Habib Ullah ကတော့ ARSA ရိုဟင်ဂျာ အစွန်းရောက်အဖွဲ့ရဲ့ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
ARSA အဖွဲ့ကတော့ ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင် အသတ်ခံရတဲ့အပေါ် တုန်လှုပ်ဝမ်းနည်းကြောင်းနဲ့ သူတို့အဖွဲ့အပေါ် စွပ်စွဲချက်ဟာ အခြေအမြစ် မရှိဘူးလို့လည်း တုံ့ပြန်ထားတာပါ။
သူသေဆုံးမှုကြောင့် ကုလသမဂ္ဂနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့တွေက ဝမ်းနည်းကြောင်းနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် အကာအကွယ်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းမှုတွေလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး A.K. Abdul Momen ကတော့ တာဝန်ရှိသူတွေကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ နယ်ခြားစောင့် ကင်းစခန်းတချို့ကို ARSA ရိုဟင်ဂျာ အစွန်းရောက်တွေက ၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကို တုံ့ပြန်တဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ စစ်ဆင်ရေးတွေကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက် တိမ်းရှောင်သွားခဲ့ကြတာပါ။
မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု လက်မခံပေမယ့် ရခိုင်ပြည်နယ်က ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို စိစစ်လက်ခံမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထားပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ရော ကုလသမဂ္ဂနဲ့ပါ သီးခြားစီ နားလည်မှုစာချွန်လွှာတွေ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း လက်တွေ့မှာတော့ ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေး အစီအစဉ်တွေ အထမမြောက်သေးသလို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်အရေး ဘယ်လို ဆက်လက် ကိုင်တွယ်မလဲ ဆိုတာကလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့ မရှိသေးပါဘူး။